သီးသန့်လုံခြုံရေးပေါ်လစီများနှင့်ကွတ်ကီးပေါ်လစီ - rayhab ဖြစ်ပါသည်
Homerayhab - မီးရထားသတင်းနှင့်လေလံပွဲသီးသန့်လုံခြုံရေးနှင့်ကွတ်ကီးပေါ်လစီ
, ဝဘ်ဆိုဒ် rayhab မှလှိုက်လှဲစွာကြိုဆိုပါသည်
အောက်ပါ "လျှို့ဝှက်သဘောတူညီချက်", အ rayhaber'n, သတင်းအချက်အလက်များ၏တင်ဆက်မှုများအတွက်လိုအပ်ချက်များကိုထိန်းညှိနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏အသုံးပြုသူများတန်ဖိုးရှိသောဝန်ဆောင်မှုပေး။
သင်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာအမျိုးမျိုးတို့ကိုဖြစ်စေသုံးနိုငျက်ဘ်ဆိုက်၏သတင်းအချက်အလက်များသွားရောက်ကြည့်ရှုသူကိုမှတ်ပုံတင်အသုံးပြုသူများနှင့်ဧည့်သည်များအနေဖြင့်စုဆောင်းထားပါတယ် rayhab ။ rayhab စီးပွားရေးလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များနှင့်အတူဤသတင်းအချက်အလက်မျှဝေနိုင်ပါသည်။ သို့သျောလညျးကို e-mail နဲ့အခြားပုဂ္ဂိုလ်ရေးသတင်းအချက်အလက်မျှစီးပွားရေးလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်, ကုမ္ပဏီ, အဖွဲ့အစည်းသို့မဟုတ်အခြားအဖွဲ့အစည်းကအသုံးပြုသူရဲ့ခွင့်ပြုချက်မရဘဲ shared မည်မဟုတ်ပါ။
rayhab အဖွဲ့ဝင်များနှင့်ဧည့်သည်သည်အသုံးပြုသူများမှပိုင်ဆိုင်သော e-mail ကို, ပထမအမည်, နောက်ဆုံးအမည်, ဖုန်းနံပါတ်နှင့်သင်မှတ်ပုံတင်မရှိ, မိတ်ဖက်, အသုံးပြုသူမဟုတ်ရင်သတ်မှတ်ပါတယ်လျှင်, ကုမ္ပဏီ, အဖွဲ့အစည်းသို့မဟုတ်အခြားအဖွဲ့အစည်းကနေစဉ်အတွင်းထဲသို့ဝင်က်ဘ်ဆိုဒ်တွင်သတင်းအချက်အလက်ထုတ်ဝေရန်မထားဘူး။
rayhab သာဥပဒေရေးရာကိစ္စများတွင်အောက်ပါသတ်မှတ်ထားသောတရားဥပဒေဆိုင်ရာလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ၏မူဘောင်အတွင်းကသင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်များကို3ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာပါတီများဖွင့်လှစ်။
ခ။ ) အမိန့် rayhab ခုနှစ်တွင် un ပိုင်ဆိုင်မှုအခွင့်အရေးများကိုကာကွယ်ရန်နှင့်ခုခံကာကွယ် '' ဖြစ်ပါသည်
rayhab ရဲ့သင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးသတင်းအချက်အလက်သာသင်ကြည့်နိုင်ပြီးမှတ်ပုံတင်။ ဤအချက်အလက်, မည်သည့်လမ်းအတွက်ကိုရောင်းငှားသို့မဟုတ်အခြားအဖွဲ့အစည်းသို့မဟုတ်အဖွဲ့အစည်းနှင့်အတူဖလှယ်ခြင်းမရှိပါ။ စာသားတွင်ထည့်သွင်း3တ္ထုများ မှလွဲ. မည်သည့်လမ်းအတွက်ဤ "သီးသန့်လုံခြုံရေးပေါ်လစီ" ။ မည်သည့်ပါတီနှင့်အတူ shared မဟုတ်ပါဘူး။ rayhab ဒီသဘောတူညီချက်ထဲမှာကျူးလွန်ခဲ့သောလိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းဖို့အားလုံးကိုတတ်နိုင်သမျှအတိုင်းအတာကြာပါသည်။
စုဆောင်းထားသောသတင်းအချက်အလက်များကိုအများပြည်သူသုံးစွဲခြင်းအတွက်မရရှိနိုင် rayhab အားဖြင့်လုံခြုံတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ထဲမှာသိမ်းထားတဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ rayhab မီဒီယာအပေါ်သတင်းအချက်အလက်များကာကွယ်ပေးရန်စက်မှုလုပ်ငန်းစံချိန်စံညွှန်းများအမျိုးမျိုးတို့ကိုအသုံးပြုသည်။
သင်မှတ်ပုံတင်စဉ်အတွင်းထဲသို့ဝင်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးသတင်းအချက်အလက်ချင်တိုင်းအချိန်, သငျသညျကို update နှင့်ကိုပြောင်းလဲခွင့်ရှိသည်။ သင်သည်သင်၏ account ကိုရပ်ဆိုင်းရန်သို့မဟုတ်ဖျက်ပစ်ရန်အခွင့်အာဏာဘာ၌တည်ပါလျှင်ဤ "သီးသန့်လုံခြုံရေးပေါ်လစီ" နှင့် "ဝန်ဆောင်မှုဆိုင်ရာသဘောတူညီချက်ကို" rayhab ။
ကြောင့်အချက်အလက်များ၏သဘောသဘာဝမှအင်တာနက်အပေါ်လုံလောက်သောလုံခြုံရေးအစီအမံများမရှိဘဲအင်တာနက်ကိုကျင်လည်ကျက်ခြင်းနှင့်ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲလူပုဂ္ဂိုလ်များကအသုံးပြုလို့ရပါတယ်။ rayhab 's တာဝန်အသုံးပြုမှုကနေရရှိလာတဲ့ဒါတွေကအသုံးပြုမှုနှင့်ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုမဟုတ်ပါဘူး။
အချို့ကိစ္စများတွင် Non-တိကျတဲ့သတင်းအချက်အလက်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရစုဆောင်းခံရဖို့။ သငျသညျအငျတာနကျဘရောကျဇာ 's အမျိုးအစား, သင်၏ operating system ကိုအသုံးပြုဖို့သတင်းအချက်အလက်ဒီ type တခုရဲ့ဥပမာ, သင်ပေးထားသောခံရဖို့ဆိုက်ဒါမှမဟုတ် domain name ကိုချိတ်ဆက်နေဖြင့်ငါတို့၏ website ရောက်ရှိဖို့။
သငျသညျထို site သွားရောက်ကြည့်ရှုသောအခါအသင်သည်သင်၏ကွန်ပျူတာပေါ်တွင်သတင်းအချက်အလက်ထားနိုင်ပါတယ်။ ထိုသို့သောသတင်းအချက်အလက်လက္ခဏာသက်သေ ( "cookie ကို") ပုံစံသို့မဟုတ်ဖိုင်အမျိုးအစား၌ဖြစ်လိမ့်မည်ကို၎င်း, တူသောနည်းလမ်းများစွာအတွက်ကျွန်တော်တို့ကိုကူညီလိမ့်မယ်။ ဥပမာအားဖြင့်, cookies များကို, က်ဘ်ဆိုက်များနှင့်ကြော်ငြာကိုကျွန်တော်တို့ကိုသင့်ရဲ့အကျိုးစီးပွားနှင့်ဦးစားပေးအညီစီစဉ်ဖို့ခွင့်ပြုပါလိမ့်မယ်။ သင့် hard disk ထဲက cookies များကိုဖျက်ပစ်ရန်အားလုံးနီးပါးအင်တာနက်ဘရောက်ဇာ, မသိမ်းဆည်းမီအရေးအသားသို့မဟုတ်သတိပေးသတင်းစကားကိုရှောင်ရှားရန်ရွေးချယ်စရာရှိပါတယ်။ ဒီဘာသာရပ်အပေါ်ပိုမိုသိရှိလိုပါက, သင့် browser ကိုအကူအညီတောင်း file ကိုရည်ညွှန်းနှင့်သတင်းအချက်အလက်ကိုသုံးပါ။
သင့် IP လိပ်စာနှင့်ဆာဗာကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြည်နယ်စောင့်ရှောက်၏ဝက်ဘ်ဆိုက်, စီမံခန့်ခွဲစဉ်ဆက်မပြတ်ပြေးများနှင့်ပြဿနာကိုဖြေရှင်းနိုင်ဖို့အသုံးပြုသည်။ သင့် IP address ကိုသင့်ရဲ့ undefined အတွက်အသုံးပြုနေပါသည်။
ဧည့်သည်များပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း, ဧည့်သည်အဖွဲ့ဝင်အဖြစ်သတင်းအချက်အလက်, သတင်းအချက်အလက်ဝှက်ထားသိုက်ကဒီစာသားထဲမှာမဆိုသတင်းအချက်အလက်ပြောင်းလဲခွင့်အပါအဝင် (အိုင်ပီ, Timestamp ကို, userAgent) သတင်း tutulur.rayhab စနစ်န်ထမ်း, သွားရောက်လည်ပတ်။ "လျှို့ဝှက်သဘောတူညီချက်" လူအပေါင်းတို့သည်အမျိုးမျိုးစည်းမျဉ်းများအတွက်ကျင်းပသွားမည်ဖြစ်ပြီးသင်နှင့်လည်းပြောင်းလဲမှုသဘောတူသောဤ site ကိုအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်။
Code ကို, သတင်း, ဓါတ်ပုံတွေ, လူအပေါင်းတို့မူပိုင်ခွင့်ထိုကဲ့သို့သောအင်တာဗျူးများ rayhaber.com အဖြစ်အကြောင်းအရာအမျိုးမျိုးတို့ကို, ပိုင်။ site ပေါ်တွင်တည်ရှိပြီးငါ့အလိုရှိသမျှဆောင်းပါးများ, ပစ္စည်းများ, ပုံများ, အသံဖိုင်တွေ, ကာတွန်း, ဗီဒီယိုများ, မူပိုင်ခွင့်, ဒီဇိုင်းများနှင့်အစီအစဉ်များမူပိုင်ခွင့်ဥပဒအမှတ် 5846 ဖြင့်ကာကွယ်ထားကြသည် rayhaber.co ။ ဤစီးပွားဖြစ် rayhaber.com, ဖြန့်ဝေပြုပြင်မွမ်းမံ, ကူးစက်မရစေခြင်းငှါ, စာဖြင့်ရေးသားခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲမည်သည့်ပုံစံကိုပြောရင်ခံရကြသည်မဟုတ်။ အသိပေးစာနှင့်အရင်းအမြစ်များ၏ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲကူးယူနှင့်အသုံးပြုမှုကိုဖန်ဆင်းနိုင်ပါသည်။
rayhaber.com အတွက်ပြင်ပလင့်များသီးခြားစာမျက်နှာဖွင့်လှစ်ပါလိမ့်မယ်။ စာရေးသူဟာပုံနှိပ်ထုတ်ဝေအရေးအသားနှင့်မှတ်ချက်များတာဝန်ရှိသည်။ ငါသည်သင်တို့ကိုမဆိုအချိန်နဲ့ပြောင်းလဲမှုမှာကိုသွားနိုင်ပါတယ်, မည်သည့်အကြောင်းကြားစာမပါဘဲ rayhaber.co ။ ဒီ site ထဲမှာအချက်အလက်များ၏အဘယ်သူမျှအမှား၏ဇာစ်မြစ်ကိုတာဝန်ရှိသည်မဟုတ်ပါ။
အားလုံးပြင်ပလင့်များ site ပေါ်တွင်သီးခြားစာမျက်နှာဖွင့်လှစ်ပါလိမ့်မယ်။ rayhaber.co ပြင်ပလင့်များများအတွက်တာဝန်ယူမထားဘူး။
rayhab သင်နှင့်သင့်ဧည့်သည်တွေရဲ့ privacy ဖို့အရေးကြီးပုံကိုပေးသည်, အောက်ပါဆောင်းပါးထဲမှာထွက်သတ်မှတ်လမ်းညွှန်ချက်များလိုက်နာဖို့ကတိပေး။
© Copyright 2019 reserved အားလုံးအခွင့်အရေးများ rayhaber.co ။
မယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်တစ်ရက်နှင့်အတူသီးသန့်လုံခြုံရေးအလင်းရထားစီမံကိန်းအားဆီသို့ရောက် လာ. , 05 / 03 / 2014 မယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်နေ့ကမီးရထားစီမံကိန်းကိုနှင့်အတူသီးသန့်တည်ရှိမှုအဖြစ်ဧရာမစီမံကိန်းအားပေါ်ထွက်သည်အထိ AKP အစိုးရကစွပ်စွဲ: မယုံနိုင်စရာနေ့ကအတူသီးသန့်လုံခြုံရေးအလင်းရထားစီမံကိန်းကိုသို့ရောက်ကြ၏။ အိုမာနို့နှင့်Ökkeş koskaan သတင်းအဆိုအရတူရကီ၌သူ၏ကုမ္ပဏီကြီးစီမံကိန်းများနှင့်အတူကမ္ဘာကြီးကိုအများပြည်သူများ၏အာရုံကိုဆွဲဆောင်သော AK ပါတီအစိုးရသည်, လုပ်ရပ်တွေကိုပြည်ပမှာယူခံရဖို့ကနောက်ဆုံးခြေလှမ်းနှင့်အတူပေါ်သယ်ဆောင်ပါလိမ့်မယ်။ အမှန်စင်စစ်, တူရကီနှင့်မြောက်ပိုင်းအီရတ်အကြားဖွံ့ဖြိုးဆဲကုန်သွယ်မှုဆက်ဆံရေးအသစ်သောရှုထောင့်ရရှိမှုနေကြသည်။ တူရကီအတွက်မြန်နှုန်းမြင့်ရထားစီမံကိန်းများ groundbreaking ဂိတ်များအနေဖြင့်စဉ်ဆက်မပြတ်ခရီးမှအစ္စတန်ဘူလ်တူရကီ '' ဝေးကျော်လွန်အမြန်နှုန်းကန့်သတ်ရပါဘူး။ လာမည့်နှစ်တွင်ရဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု Gaziantep အစ္စတန်ဘူလ်-တူရကီနှင့် Mersin များ၏စာရင်း Get နှင့်Diyarbakır-Şanlıurfaတိုးချဲ့ ...
မီးရထား re-ပြည်နယ်မူဝါဒကခဲ့ 27 / 08 / 2012 ပို့ဆောင်ရေး, ရေကြောင်းရေးရာနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနဝန်ကြီး Binali Yildirim ကျနော်တို့အစောပိုင်းသမ္မတနိုင်ငံ၏စွမ်းဆောင်ရည်အပေါ်တည်ဆောက်ခြင်းနေရထားလမ်းလိုင်းများမှသုံးစွဲနိုင်။ ကိုယ်ကသာ "ဟု၎င်းကပြောသည်။ တူရကီပြည်နယ်မီးရထားသမ္မတနိုင်ငံအထွေထွေညွှန်ကြားမှု (TCDD) ကိုအများဆုံးမြန်နှုန်းသစ်ကိုမီးရထားလိုင်းများ၏ဆောက်လုပ်ရေးမှမကြာသေးမီနှစ်များအတွင်းပေးထားသောကပြောပါတယ်", ဝမ်းမြောက်ခြင်းသင်တို့အလိုအတွက်မာနထောင်လွှားသောစကားကိုနားထောင်ရတယ် "ဟုအဆိုပါသမ္မတနိုင်ငံရဲ့ပထမနှစ်တွင်တဖန်ပြည်နယ်မူဝါဒကဖြစ်ခဲ့သည်နောက်ပိုင်းတွင်တူသော xnumx't ၌ရှိသကဲ့သို့, ရထားလမ်း ။ သူကရှင်းပြသည် Erzincan Refahiye ယဉ်ကျေးမှုနှင့်ပျားရည်ပွဲတော်အတွက်ကျင်းပဝန်ကြီးYıldırım, said: "ကြင်ဖော်မဲ့တစ်ပြားမှသူတို့ထဲကကိုဖန်ဆင်းခဲ့သည်လေးလုပ်အစိုင်အခဲရထားလမ်းငွေချေးခြင်းမရှိဘဲကြောင်းလေးဆရထားလမ်းလုပ်ခဲ့တယ်ကျွန်ုပ်တို့၏သူတို့ရှေးရှေး parsing ပြောပါ ... ။
အတူတူရောက်ရှိခဲ့သည်ဖြစ်လာနိုင်ငံတော်မီးရထား AK ပါတီမူဝါဒနှင့်အတူ 09 / 12 / 2016 အတူတကွနိုင်ငံတော်မီးရထား AK ပါတီပေါ်လစီဖြစ်လာအတူရောက်ရှိခဲ့သည်: ပို့ဆောင်ရေး, ရေကြောင်းရေးရာနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနဝန်ကြီး Ahmet Arslan "ဟုအေကေပါတီနှင့်အတူရထားလမ်းပြည်နယ်မူဝါဒကဖြစ်လာသည်။ 10 950 တထောင်ကီလိုမီတာရထားလမ်းကွန်ယက်ကိုတထောင်ကီလိုမီတာ 12 532 မှတိုးမြှင့်ခဲ့သည်။2449 တထောင်ကီလိုမီတာ signal ကိုလိုင်း58 တထောင်မိုင်အနေနဲ့ထုတ်ယူအရှည်အနေဖြင့် "ဟု၎င်းကပြောသည်။ ပို့ဆောင်ရေးဝန်ကြီးလီယို, အဝေးပြေးအထွေထွေညွှန်ကြားမှု, လေကြောင်းပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနအထွေထွေ, သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာအာဏာပိုင်နှင့် ပတ်သက်. လွှတ်တော်အမတ်များမှကြေညာချက်ဖန်ဆင်းတော်မူ၏။ ဝန်ကြီး Arslan သူတို့ရင်းနှီးမြှပ်နှံခဲ့ကြဟုဆိုသည် 308 700 သန်းဘီလီယံကိုပေါင်, သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့်သတင်းအချက်အလက်နှင့်ဆက်သွယ်ရေးကဏ္ဍစုစုပေါင်းအမျိုးသားထုတ်ကုန်၏အချိုးအစား xnumx'y yüzdexnumxထံမှလာသည်ဟုပြောကြားခဲ့့သည်က ...
မီးရထားပြည်နယ်မူဝါဒအသို့လှည့်နောက်တဖန်သူ့ခြေရင်းမှရုပ်သိမ်းခဲ့ကြသည် 25 / 07 / 2017 Anatolia ၏လူမှုရေးရာသီဥတုပြောင်းလဲနေတဲ့, အ Izmir-Aydin မီးရထားလမ်းဆောက်လုပ်ရေးစတင်ရန်စက်တင်ဘာလ 23 1856 တွင်ကယဉ်ကျေးမှုနဲ့စီးပွားရေးအသွင်သဏ္ဌာန်တစ်ခုအလှညျ့အပွောငျးဖွဲ့စည်းခဲ့ပါဘူး။ အော်တိုမန်ကာလမှသည်နှစ်တိုင်အောင် 1856 1923 ထံမှ 4.136 သမ္မတနိုင်ငံကီလိုမီတာရထားလမ်းရှေးဟောင်းအမွေအနှစ်နေ၏။ မဟာခေါင်းဆောင် Mustafa Kemal Atatürkပထဝီအခြေအနေများ 80 ကီလိုမီတာရထားလမ်းတည်ဆောက်ခဲ့အကြောင်းကိုကြမ်းတမ်းရှိရာအရှေ့ပိုင်းဒေသတွင် 3.000 ရာခိုင်နှုန်းခန့်အပါအဝင်မီးရထားအချိန်-berlig, starting ။ နှစ်တိုင်အောင်စုစုပေါင်းရထားလမ်းကွန်ယက်တွင် 1950 3.764 ကီလိုမီတာအထိရောက်ရှိခဲ့သည်ခဲ့သည်။ ဤကာလ, ရထားလမ်း, ကြီးထွားမှုနှင့်ဖွံ့ဖြိုးမှုခြုံငုံစဉ်အတွင်းအားလုံးလူမှုရေးရှုထောင့်တစ်ဦးခေတ်မီစီမံကိန်းကိုအဖြစ်ဆွေးနွေးတင်ပြခဲ့ကြသည်။ 1950 နှစ်ပေါင်းထံမှ 2002 နှင့်အတူ ...
ဝန်ကြီး Arslan: "ကျနော်တို့ပြည်နယ်မီးရထား၏ဖြစ်လာရေးမူဝါဒယူခဲ့" 17 / 03 / 2018 ပို့ဆောင်ရေး, Suleyman Demirel ယဉ်ကျေးမှုစင်တာတက္ကသိုလ်ကရေကြောင်းရေးရာနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနဝန်ကြီး Ahmet Arslan, ITU Maslak ကျောင်းပရဝုဏ်ပညာရှိလူငယ်Kulübü'nခေါင်းစဉ်ဖြစ်ရပ်မှာလူငယ်များနှင့်လည်းတွေ့ဆုံခဲ့သည်က "သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး, တူရကီ Access ကိုငါ့ကို" ဖွဲ့စည်းပေးခဲ့ပါတယ်။ အမ်းစထရောင်းသည်, သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကဏ္ဍတွင်န်ဆောင်မှုကိုရည်ညွှန်းပြီး "တစ်ခုအပြင်ဘက်တွင်လိုင်းပေါ်တွင်တင်ဆောင်နေစဉ်, 15 လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းပြည်တွင်းရေးနှင့်စုစုပေါင်း 35 သန်းခရီးသည်ကျနော်တို့ပြီးခဲ့သည့်နှစ်က 193 သန်းခရီးသည်သို့ပြောင်းရွှေ့ခဲ့သည်။ 55 စုစုပေါင်းပိုင်ဆိုင်မှုလေဆိပ်ရှိသည်။ အဆိုပါ 50 န်းကျင်နိုင်ငံတွေအတွက် 60 နိုင်ငံများတွင်ယနေ့ကျနော်တို့ 120 အမှတ်ပျံနေ 296 အမှတ်ပျံသန်းခဲ့ပါတယ်။ " သူကပြောပါတယ်။ လေကြောင်းလိုင်းအမ်းစထရောင်းဟာလူရဲ့လမ်းပြောနေကြပါတယ်သူတို့ 120 အကြောင်းကိုပျံသန်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများတိုင်းပြည်ပတ်ပတ်လည်အစီရင်ခံတင်ပြခဲ့ကြသည်ဆွဲဆောင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ အမ်းစထရောင်း, 15 လွန်ခဲ့သောဆယ်နှစ် ...
နိုင်ငံတော်မီးရထားပေါ်လစီခဲ့ 06 / 11 / 2018 ပို့ဆောင်ရေးနှင့်အခြေခံအဆောက်အဦဝန်ကြီး Cahit Turhan, သမ္မတနိုင်ငံပထမနှစ်တွင်အပြီးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုလစျြလြူရှုရထားလမ်းသူတို့သည်နောက်တဖန်ပြည်နယ်မူဝါဒအသို့ဆောင်ခဲ့သောကဆိုသည်။ ပို့ဆောင်ရေးနှင့်အခြေခံအဆောက်အဦဝန်ကြီး Cahit Turhan, ပါလီမန်စီမံကိန်းနှင့်ဘတ်ဂျက်ကော်မရှင်, နှစ်တွင် 2019, သမ္မတနိုင်ငံ 100 များအတွက်ဝန်ကြီးဌာနဘတ်ဂျက်အပေါ်တစ်ဦးတင်ပြချက်ဖန်ဆင်းတော်မူ၏။ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့်အခြေခံအဆောက်အဦများ၏လယ်ပြင်တွင်န်ဆောင်မှုနှင့်အတူကမ္ဘာနှင့်ယှဉ်ပြိုင်မှုထဲမှာသူတို့တစ်တွေသာယာဝပြောတဲ့တူရကီအောင်မြင်ရန်ရည်ရွယ်ကြောင်းအစီရင်ခံခဲ့သည်။ သမ္မတနိုင်ငံပြည်နယ်မူဝါဒကသူတို့စီးပွားရေးကိုအထောက်အကူပြုကြောင်း Turhan, ရထားလမ်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေလုပ်ကြောင်းမျဉ်းသားပြီးနောက်ပထမဦးဆုံးနှစျတှငျတဖနျလစျြလြူရှုရထားလမ်း၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု, သူတို့ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးအခြေခံအဆောက်အအုံများနှင့်လှုပ်ရှားမှုများတီထွင်ခဲ့ကြောင်းအစီရင်ခံခဲ့သည်။ သမိုင်းဝင်ပိုး၏သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးရထားလမ်းကဏ္ဍတွင် SHARE တိုး ...
BC1 သဘောတူညီချက် (Bosphorus Tube ဥမင်လိုဏ်ခေါင်း Crossing သဘောတူညီချက်) 02 / 07 / 2012 1 မေလ 06 နှင့် 2004 ဇူလိုင်လ 16 ထံမှအင်အားသုံးသို့အပြည့်အဝထဲသို့ဝင်ထားပြီးအပေါ် BC2004 သဘောတူညီချက် 27 2004 သမိုင်းဝင်သြဂုတ်လအတွင်းတင်သွင်းခဲ့တဲ့ကို လုပ်. , လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့အမှန်တကယ်ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်သည်အဖြစ်စတင်ခဲ့သည်။ BC1 စာချုပ် 16 မေလ 2004 ရှေးဟောင်းသုတေသနတူးဖော်တွေ့ရှိ၏လက်မှတ်ထိုးခြင်း (ထိုစာချုပ်စာတမ်းများကို၏ BC42 Bosphorus ရထား Tube Crossing ဆောက်လုပ်ရေးအလုပ်အတည်ပြုချက် 1 နေ့စွဲအင်အားစုထဲသို့ဝင်သော။ အဆိုပါကွန်ဗင်းရှင်းထိုရက်စွဲကနေကန်ထရိုက်တာ 06 ရက်ရာအရပ်ကယ်နှုတ်တော်မူစေခဲ့ပြီးဇူလိုင်လ 2004 ကွန်ဗင်းရှင်းခေါ်ဆောင်သွားသည်။ jbıc't) လုပ်ငန်းခွင် 17 2004 ဇွန်လ JBIC အတည်ပြုချက်ကို (ကွန်ဗင်းရှင်း၏အင်အားသုံးသို့ Entry) ဇူလိုင်လ 16 2004 တည်နေရာ Delivery နှင့်အလုပ်၏စတင် ...
နောက်ဆုံးအနေနဲ့ဆောက်လုပ်ရေးကန်ထရိုက်Balçovaကေဘယ်လ်ကားစက်ရုံလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့သည် 03 / 03 / 2013 နောက်ဆုံးအနေနဲ့ဆောက်လုပ်ရေးကန်ထရိုက်များအတွက်ဆောက်လုပ်ရေးစာချုပ်လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့Balçovaကေဘယ်လ်ကားကေဘယ်လ်ကားစက်ရုံများစက်ရုံလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့သည်။ cable ကိုကားတစ်စီးစက်ရုံ၏သက်တမ်းတိုးဘို့ Izmir6နှစ်ပေါင်း STM ကုမ္ပဏီİzmirတဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်ခြင်းဖြင့်ကျင်းပနုတစ်ဦးဆောက်လုပ်ရေးစာချုပ်လက်မှတ်ရေးထိုးထားပြီးအနိုင်ရပိတ်ထားသည်။ STM ကုမ္ပဏီတစ်ခုကBalçovaကေဘယ်လ်ကားစက်ရုံများတည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းကိုယခုနှစ် 1 ၏တစုံတယောက်ကိုရက်သတ္တပတ်အတွင်းပြီးစီးလိမ့်မည်စတင်ပါလိမ့်မည်။ အဆိုပါဂွန်ဒိုလာလှေကေဘယ်လ်ကားစက်ရုံများပြန်လည်ပြုပြင်မွမ်းမံစီမံကိန်းကိုနောက်ဆုံးတော့လေလံစတင်ခဲ့မှပြန်လာသောမြွေ၏ဥပဒေရေးရာအသွားအလာ dizzying ပုံပြင်ရဲ့အဆုံးမှာ Izmir တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်။ အဆိုပါ GCC အားဖြင့်အယူခံဝင်များ၏အဆုံးမှာအကဲဖြတ်ဖို့ related နုအနိုင်ရခဲ့သည့် STM system ကို cableway ကုမ္ပဏီ၏နိမ့်ဆုံးလေလံတန်ဖိုးရှိသန်းတထောင်ဖေဖော်ဝါရီလ 2012 နှင့် 10 225 တွင်ကျင်းပခဲ့သည် ...
Bursa Yenişehirမြန်နှုန်းရထားစာချုပ် ANN-Hill ကမိတ်ဖက်နှင့်အတူလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့သည် 30 / 12 / 2011 ဧရာမစီမံကိန်းအားလက်မှတ်ပေါင်းတစ်ဦးချင်းစီကတခြားအော်တိုမန်တူရကီနှင့်၎င်း၏မြို့တော်မှလာမယ့်တံခါး, တူရကီကနေ Sivas, တူရကီမှ Bursa, Seljuk ဖို့တူရကီကနေ Konya, တူရကီမှအစ္စတန်ဘူလ်မှ, ပို့ဆောင်ရေး, ရေကြောင်းရေးရာနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနဝန်ကြီး Binali Yildirim ပစ်ချခံခဲ့ရ YHT ၏နေရာတစ်နေရာအစီရင်ခံစေသည်ပရောဂျက်။ အဆိုပါလက်မှတ်ရေးထိုးပွဲအခမ်းအနားတွင်မိန့်ခွန်းပြောကြား Bursa အမြင့်မြန်နှုန်းရထားတှငျကငျြးပခဲ့တာကနိုင်ငံတော်မီးရထား၏အထွေထွေညွှန်ကြားမှု (YHT) Project မှ Lightning, ယနေ့ရထားလမ်းတစ်ဦးသည်မင်္ဂလာနေ့ကပြောပါတယ်, သူတို့ MDS လိုင်းအသစ်ဖြည့်စွက်လုပ်ကဆိုသည်။ အဆိုပါလက်မှတ်ရေးထိုးပွဲအခမ်းအနား Lightning မှအကျိုးရှိသောဖြစ်လိုစိတျအပိုငျးအရာများ၏ Bursa-Yenisehir ၏ပထမဦးဆုံးစင်မြင့်၏ Bursa-Bilecik လိုင်း, တူရကီသမ္မတနိုင်ငံ၏ရထားလမ်းလွတ်လပ်ရေးကဲ့သို့အရေးကြီးသောဖြစ်ပါသည်, ဤနေရာတွင်တူရကီရထားဘူတာမှစီမံခန့်ခွဲသောလွတ်လပ်ရေးရုန်းကန်, စတင်ခဲ့သည် ...
CR3 Marmaray စီမံကိန်းစာချုပ်: Gebze - Halkalı ဆောက်လုပ်ရေး, လျှပ်စစ်နှင့်စက်မှုစနစ်များသူ Work: ဆင်ခြေဖုံးလိုင်းများတိုးတက်မှု 03 / 01 / 2011 DLH (လျှော့ "ခရက်ဒစ်ပါတီ" လျှော့), ဥရောပရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဘဏ် (EIB - တူရကီမီးရထား၏သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအထွေထွေညွှန်ကြားမှုဝန်ကြီးဌာန, ဆိပ်ကမ်းများနှင့်လေဆိပ်တူရကီ၏ဆောက်လုပ်ရေးအထွေထွေညွှန်ကြားမှု (DLH) သမ္မတနိုင်ငံ, န်ကြီးဌာနပို့ဆောင်ရေး, မီးရထား, ဆိပ်ကမ်းများနှင့်လေဆိပ်ဆောက်လုပ်ရေးအထွေထွေညွှန်ကြားမှုသမ္မတနိုင်ငံ ) နှင့်ဥရောပဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ် (သောအခါ) မှ (ထို့နောက် "ဘဏ်" နှစ်ဦးစလုံးနှောင်းပိုင်းတွင်ဖြစ်လိမ့်မည်) ၏ကောင်စီက Marmaray စီမံကိန်း၏ကုန်ကျစရိတ်များအတွက်အကြွေးယူခဲ့ပါတယ်။ တင်ဒါအဘို့ဤအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဖိတ်ကြားလွှာ, Gebze-Halkalı ခရီးသွားလက်မှတ်ရထားအဆင့်မြှင့်တိုးတက်စေူခင်း: မြို့ပြ & လျှပ်စစ် & စက်မှုစနစ်များ: CR3 စာချုပ်အဘို့ဖြစ်၏။ Marmaray Project မှ, ထိုအစ္စတန်ဘူလ်ရေလက်ကြားနှစ်ဖက်စလုံးတွင်လက်ရှိခရီးသည်ရထားလမ်းစနစ်နှင့်ယင်း Bosporus အောက်ရထားလမ်းတိုးတက်လာဖို့ ...
CR3 Marmaray စီမံကိန်းစာချုပ်: Gebze - Halkalı ဆောက်လုပ်ရေး, လျှပ်စစ်နှင့်စက်မှုစနစ်များသူ Work: ဆင်ခြေဖုံးလိုင်းများတိုးတက်မှု